Umyili wezakhiwo → Umyili wezakhiwo • Umyili wezakhiwo zangaphakathi • Ufumana malini umyili wezakhiwo?
Umyili wezakhiwo usebenza ucwangciso kunye uyilo lwesakhiwo okanye isakhiwo. Abaqulunqi bayakwazi ukuhlalutya iikhonsepthi okanye izimvo zabathengi babo kwaye benze iiprojekthi ezizodwa zokwakha ngokusekwe kuzo.
Umsebenzi womyili wezakhiwo unokwahluka: ezinye zixabise kuyilo lwezakhiwo zokuhlala okanye zorhwebo, ezinye zijolise ekubumbeni umhlaba, ucwangciso lwedolophu, ngaphakathi kunye noyilo oluhlaza. Kukho nesebe loyilo elijongana namaziko emizi-mveliso.
Apha ngezantsi sijonga ngakumbi imisebenzi emibini- umyili wezangaphakathi yaye uyilo lomhlaba. Ngamnye wabo uneempawu zakhe ezithile kwaye ufuna izakhono ezahlukeneyo nolwazi.
Abaqulunqi bokwakhiwa komhlaba banokuhombisa izithuba zangaphandle, kodwa bachitha ixesha labo elininzi kwiiofisi, besenza kwaye betshintsha izicwangciso, belungiselela uqikelelo lweendleko kunye nabaxhasi beentlanganiso. Nangona kunjalo, oku akuthethi ukuba abakhi bembonakalo yomhlaba abachithi xesha kwiindawo zabo zokusebenza okanye kwindawo apho kuphuhliswa khona iprojekthi.
Uninzi lwabayili bezakhiwo basebenza kumashishini okwakha kunye nobunjineli. Abanye babo basebenzela iinkampani zenkonzo ezijongana nolwakhiwo lomhlaba.
Izakhono nobuchule bokuyilwa komhlaba
Ukuze ube yimpumelelo, uyilo lomhlaba kufuneka lube nezakhono zilandelayo kunye neempawu ezizezakho:
ubuchule - kuyakuvumela ukuba uyile iindawo ezintle zangaphandle eziza kusebenza
ukumamela ngokusebenzayo- oku kuyakuvumela ukuba uqonde iimfuno kunye neminqweno yabathengi
Ukunxibelelana ngomlomo-uyilo kufuneka abe nakho ukuhambisa ulwazi kubaxhasi bakhe
ukucinga nzulu - abakhi bembonakalo yomhlaba kufuneka benze izigqibo nokusombulula iingxaki, kwaye izakhono zokucinga ezinamandla ziya kuchonga izisombululo ezinokubakho kwaye bazivavanye ngaphambi kokukhetha eyona ilungileyo
Ulwazi lwekhompyuter-iteknoloji idlala indima enkulu kulo msebenzi, kubandakanya isoftware efana neCADD yokulungiselela imodeli kunye neNkqubo yoLwazi lweJografi
Imisebenzi kunye noxanduva lomyili wezakhiwo zomhlaba
Lo msebenzi ngokwesiqhelo ubandakanya ukuhlangana kwabathengi, iinjineli, kunye neenjineli kunye nokukhulisa obu budlelwane ukucacisa izisombululo ezinokubakho zeengxaki kunye nokuchonga iimfuno.
Kukwabalulekile ukuqwalasela izinto ezifana nokusingqongileyo kunye nokufumaneka kwamandla xa usebenza. Akukho paki inokwenziwa ngaphandle kokucwangciswa kwezicwangciso zesiza kunye nemifanekiso ebonisa izicwangciso kusetyenziswa uyilo lwekhompyuter luyilo kunye nesoftware yemveliso (CADD). Uyilo lomhlaba ulungiselela uqikelelo lweendleko kwaye ujonge uhlahlo-lwabiwo mali lweprojekthi. Akungomsebenzi wedesika.
Uyilo lwezakhiwo zokuhlala
Abaqulunqi bangaphakathi basebenza ngokusondeleyo nabaxumi ukuze bachonge iimfuno zabo kunye neminqweno yegumbi elithile okanye ikhaya lonke. Ngamanye amaxesha, zibonelela ngobuchule bokuyila iprojekthi entsha yokwakha. Ziyanceda ukudala indawo yokuhlala enye ngaphakathi okanye ngaphandle kwesakhiwo. Uninzi lweodolo lubandakanya ukudibana kwabaxhasi amatyeli aliqela, ukwenza uyilo, kunye nokubonelela ngefenitshala, iisampulu zepeyinti, ukutyibilika, kunye nokukhetha kwezibane
Njengayilo lendlu, uyilo lwentengiso lulandela inkqubo efanayo kodwa kwinqanaba elikhulu. Abaqulunqi bengaphakathi bezorhwebo bavavanya ukusebenza, uzinzo, umfanekiso wophawu lwabathengi kunye nemeko yendawo yeshishini. Iiprojekthi kufuneka zihlangabezane nohlahlo-lwabiwo mali lwabathengi kunye neemfuno zexesha. Ngamanye amaxesha, abayili bezentengiso kufuneka benze uyilo oluvumela umsebenzi ukuba uqhubeke ngexesha lofakelo.
Ipotifoliyo luxwebhu oluhambisa ibali lobugcisa ngomfanekiso, isicatshulwa, ukwakhiwa kunye nefomathi. Zininzi iindidi zazo njengoko kunabantu abaqhuba lo msebenzi. Iphothifoliyo inokuba yedijithali ngokupheleleyo, i-analog ngokupheleleyo, okanye ukudityaniswa kwezi zimbini. Icandelo lezabasebenzi lenkampani yakho linokufuna kuphela ukungeniswa kwedijithali, ukuhanjiswa ngezibuko lewebhu.
Iphothifoliyo elungileyo iqulathe iiprojekthi ezilungileyo. Ukuba zininzi zazo kumyili okanye kwiakhawunti yomyili, kungcono. Amava adlala indima enkulu kulo msebenzi.
Iingcibi ziyila izindlu, izakhiwo kunye nezinye izinto. Ezi zoyilo zisetyenziselwa izakhiwo ezitsha, ukulungiswa, ukulungiswa kunye nokwandiswa kwezixhobo esele zikho. Bakwadlala indima ephambili kwinkqubo yokulungiswa ngokutsha, ukulungisa kunye nokulungiswa kwezakhiwo ezonakalisiweyo okanye ezonakeleyo, kubandakanya izakhiwo ezikhuselekileyo, izindlu nezikhumbuzo. Umakhi uyabandakanyeka kuyo yonke inkqubo yokwakha, ukusuka kuyilo lokuqala, imizobo kunye neemodeli zesindululo, kutshintsho olusekwe kwiimfuno zabathengi. Uyilo olusebenzisanayo usebenza nabanye abaqeqeshi bezokwakha kuyo yonke iprojekthi, ukubonelela ngegalelo elibalulekileyo ukuya kwezona nkcukacha zintle, ukuya kuthi ga kuhlolo lokugqibela kunye nokuvunywa.
Bona kwakhona: Umthetho wokwakha kunye nobuncinci bokwakha
Ufumana malini umakhi?
Imivuzo ixhomekeke ikakhulu kwindawo yengqesho nakwinqanaba lamava. Iingcibi ezisisigxina ezinobuchule zinokwenza umsebenzi onzulu ohlukeneyo, njengokuzoba iiprojekthi, ukutyelelwa kweendawo zeprojekthi, nokunika ingxelo kumyili wezinto ezakhiweyo weprojekthi.
Njengomyili wezakhiwo ozimeleyo unokujonga inqanaba elithile lenkululeko ngokwexesha lokusebenza kunye nokukhethwa kweprojekthi. Inani lomsebenzi weofisi kunye noyilo lokwenyani luyakhula ngamava anyukayo kunye nokuzithemba.
Njengoko amava ekhula kwaye uxanduva lutshintsha- kunjalo nomvuzo. Ke ngoko, kunzima ukutsho ngokungathandabuzekiyo ukuba ingakanani igcisa eliyamkelayo.
Bona kwakhona: Ucwangciso lwedolophu- yeyiphi kanye kanye?
5 / 5 ( 26 iivoti )
uyilouyilo lokwakhauyilo lweCzęstochowauyilo katowiceUyilo lomhlabaumakhi weKrakowumyili wesikhepheuyilo Lublinuyilo olutshauyilo poznańuyilo Szczecinumyili wemfazweumyili wezangaphakathiumakhi wezangaphakathi weKrakowiphenyane elingumakhi wezakhiwoumyili wezangaphakathi poznańumyili wezangaphakathi weSzczecinumyili wangaphakathi warawUmyili wezinto zangaphakathiuyilo Wrocławuyilo lwemivuzoNgaba umyili wezinto zangaphakathi ufumana maliniuyilo oluyimfunekoipotifoliyo yoyiloUmsebenzi wokwakhaUmsebenzi wokuyilwa komhlabaumyili wezobugcisaubugcisa bokwakha